एक सफल काम साक्षात्कार लागि सुझाव | USAHello | USAHello
तपाईं एक काम साक्षात्कार लागि निमन्त्रणा प्राप्त गर्नुभयो? तपाईं शायद राम्रो गरिरहेका बारेमा स्नायु हो. तपाईं आफैलाई तयार लाग्न सक्छ कदमहरू छन्. साक्षात्कार प्रक्रिया काम गर्दछ र कसरी तयार गर्न कसरी सिक्न. जागिर साक्षात्कार राम्रो गरिरहेका लागि केही सुझावहरु पढ्नुहोस्.
काम साक्षात्कार प्रक्रिया
एक काम साक्षात्कार तपाईं र कर्मचारी बीचको कुराकानी छ. साक्षात्कार समयमा, को कर्मचारी तपाईं धेरै प्रश्न हुनेछ. तपाईं कसरी एक साक्षात्कार लागि तयार जान्नु आवश्यक. यो काम रही सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कदम को छ.
को कर्मचारी आफ्नो काम अनुभवको बारेमा सोध्न हुनेछ. तिनीहरूले आफ्नो शिक्षा र तपाईं छन् कुनै पनि प्रशिक्षण बारेमा जान्न चाहन्छु हुनेछ. आफ्नो जवाफ प्रश्न पनि साक्षात्कार व्यक्ति कस्तो हो देखाउन. तपाईं काम को लागि एक राम्रो व्यक्ति हुन् भन्ने कर्मचारी देखाउने.
काम साक्षात्कार सधैं व्यक्तिमा ठाउँ लिन छैन. तपाईं पहिलो फोन साक्षात्कार हुन सक्छ. तपाईं कम्पनी मदत कसरी देखाउन यो मौका प्रयोग. तपाईं फोन साक्षात्कार पारित यदि, त्यसपछि तपाईं व्यक्तिमा अन्तरवार्ता गरिनेछ. धेरै जब लागि, तपाईंले एक फोन साक्षात्कार र कम से कम एक हुनेछ मा-व्यक्ति साक्षात्कार. वा तिनीहरूले तपाईं एक भिडियो कल सेट अप सक्छ.
काम साक्षात्कार अघि
यसलाई आफ्नो साक्षात्कार लागि तयार महत्त्वपूर्ण छ. तपाईं हरेक समय अभ्यास गर्नु पर्छ त हरेक कम्पनी अलग छ.
तपाईं कम्पनीको वेबसाइट जानकारी मार्फत पढ्न सक्नुहुन्छ. तपाईं पनि कम्पनी बारेमा जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ LinkedIn. यी प्रश्नहरूको जवाफ खोज्न:
Google मा कम्पनी को नाम को लागि खोज र क्लिक गर्नुहोस् "समाचार". तपाईं राम्रो समाचार हेर्न भने, तपाईं आफ्नो साक्षात्कार मा उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ.
मा कम्पनी फेला सिसाको ढोका, जो एक वेबसाइट कर्मचारीहरु कम्पनी कुरा कहाँ छ. यो एक सार्वजनिक स्थानमा छ भने, यस्तो स्टोर वा रेस्टुरेन्ट रूपमा, मा जानुहोस् र भ्रमण. तपाईं आफ्नो अनुसन्धान रूपमा, तपाईं आफ्नो साक्षात्कार मा सोध्न सक्नुहुन्छ केही प्रश्न सोच सुरु र तिनीहरूलाई लेख्न.
काम साक्षात्कार प्रश्नहरूको जवाफ अभ्यास
तपाईंले पहिले नै बनाएको र आफ्नो रिजुम पठाउनुभएको छ. को कर्मचारी केहि बारे थप विवरण आफ्नो रिजुम लेखिएको माग्छ. यो तपाईं साक्षात्कार अघि आफ्नो रिजुम पढ्न महत्त्वपूर्ण छ. के तपाईं काम कम्पनीहरु वर्णन गर्न सक्षम हुन वा विगतमा लागि स्वेच्छा गर्नुपर्छ. ठूलो रिजुम बनाउनको लागि सुझावहरू पढ्नुहोस्.
तपाईं आफ्नो साक्षात्कार को दिन राम्रो छाप बनाउन के गर्न सक्नुहुन्छ केही कुराहरू छन्.
आफ्नो काम साक्षात्कार लागि समय!
राम्रो कर्मचारी रहेको समयमा काम गर्न आउने अर्थ. समय रहेको संयुक्त राज्य अमेरिका मा धेरै महत्त्वपूर्ण छ. तपाईंको साक्षात्कार गर्न आउँदै लेट तपाईं भाडामा छन्, यदि तपाईं काम को लागि लेट हुन सक्छ कि साक्षात्कारकर्ता देखाउँछ. यो तपाईं राम्रो काम साक्षात्कार कौशल छ भने पनि भाडामा भइरहेको आफ्नो संभावना कम हुनेछ.
आँखा मा मान्छे मुस्कान र हेर्न प्रयास. यो सकारात्मक र अनुकूल छन् साक्षात्कारकर्ता देखाउँछ. हुनत यो तपाईंको संस्कृति भन्दा फरक हुन सक्छ, यो तपाईं एक काम प्राप्त गर्न मद्दत गर्न संयुक्त राज्य अमेरिका मा गर्न सक्छन् सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुराहरू एउटै हो. अमेरिका लागि, बनाउने आँखा सम्पर्क आदर देखाउँछ र मानिसहरू विश्वास गर्न मद्दत गर्छ. जब तपाईं साक्षात्कार मा आइपुग्दा, विभिन्न मानिसहरूले तपाईं अभिवादन हुन सक्छ. तपाईं पूरा र हेर्न र सबैलाई मा मुस्कान प्रयास सबैलाई विनम्र हुन.
काम साक्षात्कार समयमा
आफ्नो काम साक्षात्कार समयमा, तनावमुक्त हुन प्रयास. सजिलो छैन. सत्यवादी हुन आफैलाई सम्झाउनुहोस्, प्राकृतिक, र उत्साहित. जब तपाईं थाहा तपाईं आफ्नो सर्वश्रेष्ठ गरिरहेका छन्, तपाईं गल्तीहरूको बारेमा स्नायु हुन छैन.
हात मिलाइ साधारण हो अमेरिका मा. पुरुष र महिला प्रत्येक अन्य संग हात मिलाउ लागि यो ठीक छ. तपाईं हात मिलाउ गर्न चाहनुहुन्छ भने, त्यो ठिक छ. सट्टा, आफ्नो छाती भरि आफ्नो हात राख्न र अलिकति अगाडी आफ्नो टाउको झुकाव. स्पष्ट भन्न, "यो तिमीलाई भेट्न त राम्रो छ. आज मलाई साक्षात्कार गर्न समय दिनुभएकोमा धन्यवाद। "केही मानिसहरू हात साझेदारी गर्न चाहँदैनन् भन्ने छक्क हुन सक्छ. तपाईं आराम महसुस भने, विपरीत सेक्स हात मिलान आफ्नो धर्म विरुद्ध छ भन्ने व्याख्या.
निश्चित आफ्नो फोन काम साक्षात्कार समयमा बन्द गरिएको छ
त्यहाँ सफलता को आफ्नो मौका वृद्धि गर्न तपाईं आफ्नो साक्षात्कार पछि लाग्न सक्छ केही कदम हो.
तपाईं एक पत्र वा इमेल द्वारा ध्यान दिनुहोस् धन्यवाद पठाउन सक्नुहुन्छ. अधिकांश मानिसहरू इमेल प्रयोग. के तपाईं व्यापार कार्ड लागि अनुरोध गर्न बिर्सनुभयो भने, इमेल गर्न वा कार्यालय कल र सम्पर्क जानकारी को लागि अनुरोध.
आफ्नो काम मा राम्रो